Soo Iibso Budada Yam Soosaarida budada - Rar bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
Budada Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah
$ 99.99 qiimaha joogtada ah $ 142.99
Budada Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah - 1000g gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Yam Dabiiciga ah
Maxay tahay sababta Yam loo soosaaray budada:
Budada Dhirta Dhirta Dabiiciga ah, oo badanaa loo yaqaan xididka caloosha ama duurka duurjoogta ee Mexico ayaa asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha iyo Waqooyiga Ameerika. Dhirta duurjoogta ah, oo magaceeda botanical-ka ah loo yaqaan 'Dioscorea villosa', waa geed canab ah oo tubbooy ah (oo aan xidid ahayn, sida caadiyan loo maleeyo) oo ka baxa gobollada qoyan iyo kuwa qoyan. Waxaa laga heli karaa iyada oo ku koraysa jiqda adduunka oo dhan, halkaas oo ay ku taal cimilo kuleyl, kuleyl, iyo cimilo dhexdhexaad ah.
Dhirta duurjoogta ah iyo soosaaradeeda ayaa laga isticmaalay dalal badan oo adduunka ah iyadoo laga helay faa'iidooyin badan.
Yam waa saxan caan ku ah nolosheena. Waxay leedahay dhejis dhejis ah oo afka ah. Macno malahan waa la shiilay ama maraq ku jira, waxay leedahay dhadhan ka duwan. Kaliya maahan cunno macaan laakiin sidoo kale waxay leedahay saameyn daawooyin. Dioscorea waxaa ku jira mucin, amylase, iyo walxo kale, waxyaabaha ku jirana waa kuwo hodan ah. Haddii aad badanaa cunto, waxay xoojin kartaa jirkaaga waxayna dib u dhigaysaa gabowga.
Budada Dabiiciga ah ee Soosaarka Duurjoogta ah waxay ka kooban tahay xaddi badan oo maadada loo yaqaan 'mucoprotein', taas oo jidhka qofka siin karta noocyo badan oo glycoproteins ah Waxay kordhin kartaa xuubka xuubka xabka iyo maqaarka, waxayna yareyn kartaa isku soo ururinta dufanka subcutaneous. Waa cunto qurux badan.
Buuxinta beeryarada iyo caloosha.
Dhiirrigelinta dheecaanka dheecaanka oo ka faa'iideysta sambabada
Kordhinta hormoonada iyo habeynta howlaha jirka.
Waxay Kordhisaa Nabarrada Maqaarka & Waxay Yareysaa Isugeynta Dufanka Subcutaneous